Iindaba -umahluko phakathi kokupheka ngokungenisa kunye nokupheka kwe-infrared
Umgaqo osebenzayo wokupheka kwe-infrared: emva kokufudumeza isiseko sesithando sokufudumeza (i-nickel-Chromium yokufudumeza umzimba), yenza ifom efanelekileyo ephezulu kufutshane ne-infrared ray. Ngokusetyenziswa kweplati yomphezulu we-microcrystalline, imveliso ye-infrared ray esebenzayo iyenziwa. Umgca womlilo uthe tye, kwaye uxinzelelo lobushushu lufafazwe ngokuthe ngqo ezantsi embizeni, ukuze kufezekiswe isiphumo sokufudumeza.Ngokwesiqhelo, ucingo lokumelana lubekwa phantsi kwembiza. Ucingo lokuchasana luthintelwe ngocingo kwaye lube bomvu, luvelise ubushushu. Ubushushu bunikwa embizeni yokuphumeza isiphumo sokufudumeza.
Umgaqo wokusebenza wokupheka okwenzekileyo: ukutshintshisa okwangoku kusetyenziswa ukutshintsha amandla e-magnetic kunye nokutshintsha rhoqo kwicala lekhoyili. I-Eddy yangoku iya kuvela ngaphakathi komqhubi kumhlaba wamagnetic otshintshayo. Isiphumo sobushushu seJoule sombane weeddy siya kwenza ukuba umqhubi afudumale, ukuze aqonde ukufudumeza.Inqaku elithandwayo, sisiphumo ngqo sokungeniswa kombane embizeni, imbiza ngokwayo iyafudumeza, ukufezekisa indima yokufudumeza ukutya.
Umahluko wokuqala: Iya kusebenza embizeni.
I-infrared cooker idlulisela ubushushu ngqo embizeni, ke imbiza inokwenziwa ngezinto ezahlukeneyo, ngokusisiseko akukho mbiza, nayiphi na imbiza enokusetyenziswa.
I-induction cooker yimbiza ekufakweni kwe-electromagnetic phantsi kobushushu, ukuba imbiza enezinto ayinakuyamkela indima yemagnethi, emva koko ukufudumeza akukho ngaphandle kombuzo, ke umpheki unemiqobo, unokusebenzisa imbiza yamagnetic, enje ngentsimbi imbiza.
Umahluko 2: iqondo lobushushu.
Umpheki we-infrared ushushu kancinci kuba ubashushu ubushushu, obugqithiselwa embizeni.
I-induction cooker sele iqalile ukufakelwa kwe-electromagnetic, imbiza yemagneti iya kuphucula ubushushu, ngenxa yoko isantya sikhawuleza kakhulu kunesithando somlilo sombane.
Ke kusetyenziso lwenkqubo, imbiza yokupheka ithambekele ngakumbi ekukhetheni umpheki wokungeniswa, kuba ukufudumeza kukhawuleza.
Umahluko 3: umphumo weqondo lobushushu rhoqo.
Isithando somlilo sombane sinomsebenzi ochanekileyo wokulawula ubushushu, oya kuthi unciphise amandla xa ufikelela kubushushu obuthile, kungoko isiphumo sobushushu rhoqo singcono.
Induction iziko ukufudumeza okuphakathi, kushushu kakhulu, kusondele, kuqhubeke ukufudumeza, ke isiphumo sobushushu rhoqo asisihle.
Ke ngoko, ubisi olushushu lukhetha isitovu sombumbi wombane kungcono.